အမေရိကန်တို့၏ အက်ဖ် ၄ တိုက်လေယာဉ် သည် အသံထက် မြန်သည့် အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် ၊ နှစ်ယောက်မောင်း ဗုံးကြဲ တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ရေတပ်၊ ကမ်းတက်တပ်ဖွဲ့နှင့် လေတပ်တို့၏ အဓိက တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲအတွင်း မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် ကင်းထောက်ခြင်းများတွင် ပြောင်မြောက်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ kill ratio မှာ 2.5 to 1 အဆင့်ရှိ၏။ ၁၉၆၀ တွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း အဓိက တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုခေတ်မှီသော တိုက်လေယာဉ်များနှင့် အစားထိုးလာခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း (၅၁၉၅) စီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းနိုင်သည့် အမြန်နှုန်း - တစ်နာရီလျင် ၂၃၇၀ ကီလိုမီတာ (အသံထက် ၂.၂၃ ဆ/mach 2.3)
↑ Watch F-4 Phantom II: Highest Kill Ratio Clip - History.comhttps://www.history.com › videos › f-4-phantom-ii-highes...
8th Tactical Fighter Wing site Archived 20 October 2006 at the Wayback Machine.
F-4 Phantom II articles and publications, theaviationindex.com Archived 12 June 2011 at the Wayback Machine.
The Phantom page with images on fas.org Archived 21 October 2013 at the Wayback Machine.
RAF Phantom Losses Archived 24 August 2015 at the Wayback Machine.
Multiple photos about Spanish Air Force F-4C (in Spanish) Archived4July 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဖ်-၄_ဖန်တွန်_၂&oldid=728927" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။